I-USDA Igwema Ukuhlaziya Izinsalela zeGlyphosate Ekudleni Kombiko Wonyaka - Ilungelo Lase-US Lokwazi
I-USDA Igwema Ukuhlaziya Izinsalela zeGlyphosate Ekudleni Kombiko Wonyaka
Posted on January 11, 2016 by UCarey Gillam
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoMsombuluko, Januwari 11, 2016
Ngemininingwane engaphezulu Xhumana: UCarey Gillam, uMqondisi Wocwaningo (913) 526-6190, carey@usrtk.org
Iqembu elimele abathengi i-US Right to Know ligxeke uMnyango wezoLimo e-US namhlanje ngokukhipha unyaka nonyaka umbiko wezinsalela zezibulala-zinambuzane lokho kugweme noma yikuphi ukuhlolwa kwezinsalela ezivela ku-glyphosate, i-herbicide ethengiswa kakhulu ebaluleke kakhulu ezinkampanini zezolimo ezihlangene, kepha exhunywe nomdlavuza.
Isifinyezo sohlelo lwemininingwane yokubulala izinambuzane lwaminyaka yonke lwe-USDA sifaka imininingwane i-USDA ethi “ukuqinisekisa abathengi ukuthi ukudla abakondla imindeni yabo kuphephile.” Uhlelo minyaka yonke luhlola izinhlobo ezahlukahlukene zokudla kwasekhaya nokungenisiwe ukuqoqa imininingwane ukuthola ukuthi ukutholakala kwemithi yokubulala izinambuzane ngokudla kungaphansi kwezindinganiso zokuphepha ezibekwe nguhulumeni. Uhlelo lwe-USDA luvivinya kakhulu izibulala-zinambuzane ezingamakhulu amaningana unyaka ngamunye, futhi uhulumeni uthi ubheka ngqo ukudla okungenzeka kudliwe yizingane nezinsana.
Kepha ngaphandle kwezidingo zabathengi zokufakwa kwe-glyphosate, idatha ye-USDA iyaqhubeka nokufaka ngaphandle ukuhlolwa kwalowo mbulali wezinambuzane. Kanye kuphela emlandweni wohlelo lweminyaka engama-24 lapho i-ejensi yenze izivivinyo ngezinsalela ze-glyphosate. Lezo zivivinyo, ngo-2011, zazilinganiselwe kumasampula kabhontshisi angama-300 futhi athola lokho Amasampula angama-271 ayenezinsalela ze-glyphosate.
Imithi yokubulala ukhula esuselwa eGlyphosate iyimithi yokubulala izinambuzane esetshenziswa kakhulu kunazo zonke emhlabeni, kanti ukusetshenziswa kwe-glyphosate kuye kwanda kakhulu e-United States selokhu kwethulwa eminyakeni engu-20 eyedlule yezitshalo ezakhiwe ngofuzo ukubekezelela ukwelashwa kwe-glyphosate. IMonsanto Co ingomunye wabahloli abakhulu be-herbicide ngomkhiqizo wayo we-Roundphosate-based Roundup. Izitshalo eziningi zokudla ezifuthwayo zifuthwa ngqo nge-glyphosate, kufaka phakathi ummbila, ubhontshisi, izithombo zikashukela, i-canola futhi kwezinye izimo, ukolweni, yize ukolweni ungazange wenziwe ngezakhi zofuzo njenge-glyphosate-tolerant.
Ukwesaba kwabathengi mayelana nezinsalela ze-glyphosate ekudleni sekukhuphukile njengoba ucwaningo luthole i-glyphosate emoyeni, namasampula wamanzi, futhi ngemuva kokuthi ososayensi bomdlavuza abasebenzela uphiko lwe-World Health Organisation bethole ukuthi kunobufakazi obanele bokuhlukanisa i-glyphosate ngokuthi “mhlawumbe i-carcinogenic kubantu. "
"Kuyihlazo ukuthi i-USDA ihlola amakhulu ezinsalela zezibulala-zinambuzane kodwa hhayi i-glyphosate, engenye yamakhemikhali asetshenziswa kakhulu ezitshalweni zethu zokudla," kusho uGary Ruskin, umqondisi obambisene ne-US Right to Know. “Abathengi bafuna ukwazi ukuthi ingakanani i-glyphosate ekudleni kwethu. Kungani i-USDA ingasitsheli? Lokhu kubukeka njengomunye umusa omkhulu ovela kuhulumeni wethu wesifundazwe uye eMonsanto. Sekuyisikhathi esidlule sokuthi iCongress iphenye ukuthi kungani abaphathi baka-Obama benika lezi zimnandi isithandwa seMonsanto kanye nemboni yezolimo. ”